Kooxda Manchester City oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Fabian Ruiz – Gool FM
(Manchester) 25 Mar 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay loollanka loogu jiro saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee aadka loo qiimeeyo ee kooxda Napoli, Fabian Ruiz.
Xiddiga reer Spain ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo Talyaaniga isbuucyadii u dambeeyay, iyadoo Liverpool, Barcelona iyo Real Madrid ay dhammaantood la rumeysan yahay inay xiisaynayaan ciyaaryahankan khadka dhexe.
Sida laga soo xigtay Corrier dello Sport, kooxda Pep Guardiola ayaa ka fiirsaneysa inay badal uga dhigto ciyaarhankeeda David Silva, waxayna u aqoonsadeen Ruiz inuu yahay saxiixa ugu macquulsan.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in Napoli aysan u ogolaan doonin 23-sano jirkaan inuu si sahlan uga tago, kooxda reer Talyaani ayaa lagu soo waramayaa inay 100 milyan oo euro ku qarash-gareysay ciyaaryahanka khadka dhexe.
Ruiz ayaa loo diiwaan galiyey labo gool, sido kalena labo gool kale ayuu caawiye ka ahaa xilli ciyaareedkan horyaalka Serie A.
Xiddigan ayaa kooxda kubadda cagta Napoli wuxuu ku soo biiray sanadkii 2018-kii, isagoo u saftay 48 kulan, wuxuuna u dhaliyay 7 gool oo qura.
Daafaca Man City ee Aymeric Laporte oo hoos u dhigay xiisaha uga imaanaya Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona